Mufundisi Akarota Rufu rwaVaMugabe Oenda kuConstitutional Court
Mufindisi Patrick Mugadza
Mutongi wedare ramejasitiriti, Amai Nomsa Sabarauta, vabvuma chikumbiro chemukuru wekereke yeRemnant, Mufundisi Phillip Mugadza, chekuti nyaya yavari kupomerwa yekuti vakarota kuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vachafa muna Gumiguru gore rino, chiendeswe kudare repamusorosoro, reConstitutional Court.
Izvi zvinotevera kugunung’una kwaMufundisi Mugadza vachiti vari kutyorerwa kodzero dzavo pasi pebumbiro remitemo nekuramba vachitongwa nenyaya iyi.
Rimwe remagweta ari kumirira Pastor Mugadza, VaGift Mtisi, avo vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanoti chikumbiro chaVaMugadza ndechekuti dare repamusorosoro ritarise kuti Chikamu 42 (2) chemutemo weCriminal Law (Codification and Reform) Act (Chapter 9:23) chiri pamutemo here kana kuti chinotyora kodzero dzevanhu dzinochengetedzwa nezvikamu 51 ne56 (1), ne(3) ne 60 (1)(a) ne (b), ne61 (1)(a) zvebumbiro remitemo.
"Nyaya yavari kupomerwa iyoyi iyi inonzi offending people of a certain race, or religion, or alternatively criminal nuisance, zvichibva pakuporofita kwavakaita ivo kuti mutungamiri wenyika achafa musi wa 17 October.
"Saka takati mutemo iwoyo une kakumbunyikidza kwauri kuita, kubatirira kodzero dzavo VaMugadza. Kodzero dzavo dzinopuwa ne constitution. Saka nekuda kwaizvozvo takaisa chikumbiro chekuti nyaya iyoyo iende kudare repamusoro rinokwanisa kutsanangura kuti kuvatongera nyaya iyoyo kutyora kodzero dzavo here kana kuti kwete," VaMtisi vanodaro.
Vanoti vachuchisi vehurumende vakanga vachipikisa chikumbiro ichochi kwemwedzi yakawanda, asi vanofara kuti mutongi wedare azochitambira akaona zvakakodzera kuti nyaya iyoyi iendeswe kuConstitutional Court.
Pastor Mugadza vakasungwa musi wa 16 Ndira gore rino vachipomerwa mhosva yekushungrurudza rumwe rudzi nechitendero zvinove zvinopikisana neChikamu 42 (2) chemutemo, mhosva yavari kupikisa.
Hurukuro naVaGift Mtisi